Sei Enterprise Brands Vashandi uye Bhajeti Yemagariro | Martech Zone
China, December 19, 2013 Douglas Karr
Wildfire uye Ad Age munguva pfupi yapfuura yakaita a tsvakurudzo kubvunza pamusoro pe500 kushambadzira kwebhizinesi mamaneja nevatungamiriri nezve maitiro avo ekushambadzira munharaunda. Ivo vakadzidza izvo mhando dzakanakisa uye dzakabudirira kwazvo dziri kuita kubatanidza vateereri, pamwe nezvinoitwa nevaya vanotambura nehukama nevanhu.
Zvemagariro midhiya haisisiri sarudzo yebhizinesi, zvakakosha kuti uchengetedze uye chengetedza hunhu hwechiratidzo chako pamhepo. Kubva kubasa revatengi kuenda kutengesa, unogona kuwana ese maindasitiri pamhepo - kutsvagisa kwavo kunotevera kutenga uye nekuparadzira izwi pane yavo yekupedzisira. Moto Wesango inonongedzera izvi zvakakosha:
45% emakambani ane mari inodarika $ 1 bhiriyoni ane vashandi vanopfuura makumi mashanu vakazvipira kumagariro enhau.
Kushambadzira, PR, uye Ruzivo rweVatengi ndiwo zvikwata zvepamusoro zvine chekuita nevemagariro, asi zvemagariro zvinokanganisa kusvika kumatimu gumi pane rese bhizinesi.
68% emakambani anotarisira kuwedzera mari yemagariro mune inotevera bhajeti kutenderera, zvichiratidza kuti chikamu chemagariro musanganiswa wekushambadzira chinozivikanwa uye chinokosheswa.
Tags: 2013tsumobhajetiEnterpriseGoogle +sei marongerwo bhajetievanhu vezvenhaupasocial media budgetmudonzvomamiriro enzangaapp yemoto wemusangomoto wemoto
Slick Kick: Global Global Chiteshi Kushambadzira Platform